प्रहरीमाथि विश्वासको संकट, डीएनए परीक्षण किन प्रहरीकै ल्याबमा ? – Waikhari
गृहपृष्ठ पत्रपत्रिका बाट प्रहरीमाथि विश्वासको संकट, डीएनए परीक्षण किन प्रहरीकै ल्याबमा ?
काठमाडौं । प्रहरीमाथि विश्वासको संकट छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले चरम लापरबाही गर्‍यो। मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिलाई अभियुक्तको रूपमा खडा गरिएका कारण प्रहरीमाथि सबैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा थप आशंकित व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षण पनि प्रहरीकै प्रयोगशालाबाटै भइरहेको छ। जब कि प्रहरीको भन्दा अत्याधुनिक प्रयोगशाला खुमलटारमा छ।
डीएनए स्याम्पलिङका लागि मात्र प्रहरीले केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाउने गरेको छ। प्रहरीको प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त रहेको र त्यहाँ विशेष्ज्ञहरू रहेकाले कुनै शंका गर्नुनपर्ने प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी बताउँछन्।अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ।
काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले अनुसन्धानलाई साँघुरो बनाउँदै लगिएको तर निष्कर्ष कहिले आउने भनेर समय तोक्न नसकिने बताउनुभयो ।
महानिरीक्षक खनालले भन्नुभयो, “हाम्रो सामथ्र्यले सक्ने काम गरिरहेका छौँ, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम नभइदिएको भए सहज हुन्थ्यो तर यो घटनामा कसैको दबाब छैन र कसैको दबाबले अनुसन्धान प्रभावित हुँदैन, प्रमुखका रुपमा कुनै कमजोरी देखिए संसदमा राखेर मेरो बर्दी खोलिदिए हुन्छ ।”
कञ्चनपुरकी बालिका पन्तको गत साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषी पत्ता नलागेको विषयमा आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा समितिले साेमबार प्रहरी प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेको थियाे । महानिरीक्षक खनालले घटना अनुसन्धानमा गैर व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेको देखिएपछि केही प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गर्ने काम भइसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका केही व्यक्तिको नाम हतारमा दिइएका कारण अनुसन्धानमा कमजोरी भएको घुमाउराे पाराले स्वीकार गरे । अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेकाे छ ।